IChromecast 2, sihlalutya iGoogle's "AirPlay" [IVIDIYO] | IPhone iindaba
I-Chromecast 2, sihlalutya i-Google's "AirPlay" [IVIDIYO]
UMiguel Hernandez | | Izixhobo ze-IP, iPhone
Sithanda ukusasaza umxholo wethu owuthandayo kumabonwakude, ngakumbi ngoku kuba siphila kwihlabathi elixhumeneyo. Ngelishwa, ii-TV zeSmart zihlala zinenkqubo yokusebenza engenamsebenzi kwaye inqongophele, nangona kunjalo, sinezixhobo ezininzi ezilula ukuzilungiselela ezisivumela ukuba sonwabele wonke umxholo wemultimedia esiyifunayo kwigumbi lokuhlala. Namhlanje sifuna ukuthetha nawe malunga I-Chromecast 2, inguqu yexabiso eliphantsi ye-AirPlay eneGoogle kwintengiso, Siza kuhlalutya umxholo wemveliso kunye nobunzima bayo kunye nokusikelwa umda. Ukuba ucinga ukufumana iChromecast ngekhe uluphose olu hlalutyo.
Ukuqala, kufuneka sazi indlela yokwahlulahlula. I-Chromecast 2 ayikho kwaye ayenzelwanga ukuba ibe yi-Apple TVNgapha koko, njengemveliso kaGoogle, inezithintelo. Imida echaphazela ikakhulu izixhobo ze-iOS, kuba ngokwezixhobo ze-Android ayibonisi phantse nayiphi na into, nokuba ivumela ukubukelwa (isipili sescreen secebo) ngqo kwiTV. I-Chromecast 2 ayisiyiyo i-AirPlay nokuba, ngale nto ndiyathetha ukuba ayizukuvela kwi icon ye-AirPay yesixhobo sethu, ke ngekhe sikwazi ukwabelana ngomxholo ngokulula njengoko sisenza nge-Apple TV, nangona zikhona ezinye iindlela Siya kukuxelela ukuba yintoni ekupheleni kwesithuba.
1 Ividiyo ye-unboxing, uphononongo kunye nokuvavanywa kwesixhobo
2 Luluphi uphuculo olunalo ngaphezulu kweChromecast yoqobo?
3 Ii -apps ziyinjini yeChromecast
5 Imixholo yebhokisi
Ividiyo ye-unboxing, uphononongo kunye nokuvavanywa kwesixhobo
Luluphi uphuculo olunalo ngaphezulu kweChromecast yoqobo?
Bambalwa, ukuba phantse akukho namnye. Eyona nto intsha iyilo loyilo, olufumaneka ngemibala emine, nangona sigqibe kwelokuba siye kumbala omnyama ukuze singaphuli ukuvumelana phakathi kwezixhobo zeziko lemultimedia, zonke zimnyama. Icwecwe, kodwa iphelela ekubeni nkulu kunesizukulwana sangaphambili seChromecast. Nangona kunjalo, intambo yayo eguqukayo nethambileyo yenza kube lula ngathi ukuyiplaga nakweyiphi na ithelevishini ngaphandle kwengxaki. Ukongeza, phakathi kwentambo kunye neChromecast 2 sinendawo enomazibuthe, eya kuthi isivumele ukuba sibambelele kwiChromecast 2 ukugcina indawo ngakumbi ukuba kunokwenzeka.
Kwicandelo lobugcisa sinesixhobo esinaso iprosesa enamandla ngakumbi kunesizukulwana esidlulileyo, sikhatshwa zimbini-band ac WiFi. Nangona kunjalo, umxholo ongaphaya kwe-1080p (i-HD epheleleyo) uza kuqhubeka ukungahambelani neChromecast 2, into engasothusiyo kwisixhobo se- € 39 kuphela.
Ii -apps ziyinjini yeChromecast
Ngeli xesha ke siza kucacisa malunga nomba "we-AirPlay". Into emnandi nge-AirPlay ka-Apple kukuba xa isixhobo sokufumana sihambelana, asinangxaki ekuthumeleni enye okanye enye into, naluphi na uhlobo lokudlala luya kusebenza, kuba ikhonkco sisixhobo se-iOS / AppleTV. Nangona kunjalo, oku akunjalo ngeChromecast, Isicelo seGoogle Cast se-iOS asiyenzi i-AirPlay, ke, isicelo ngasinye kufuneka songeze iqhosha elithile ukwabelana ngomxholo. Sifumana iinkonzo ezifunwayo ezifana neYomvi (Movistar +) engakuvumeliyo ukusasaza umxholo kwiChromecast, nangona ezona zidumileyo zinje ngeSpotify, iYouTube neNetflix.
Eli linqaku elibi, ukuthatha ithuba kwiimpawu ze-AirPlay bekuya kubonakala ngokucacileyo, nangona kunjalo, kukho ezinye iindlela. Ngoku ndisebenzisa Ubulumko ukulahla umxholo wam ongafumaneki kwiinkonzo ezifunekayo ngeChromecast. Kwelinye icala, enkosi kuSafari esivumela izandiso, siyabamba Momocast, isicelo esongeza ukongezwa kwiSafari esiya kuthi sivumele ukuhambisa nawuphi na umxholo esiwudlalayo kwiChromecast yethu, kunye nesipili esivela eSafari, eyona ndlela ifanelekileyo.
IChromecast 2 kaGoogle inika oko ikunikayo, asinakho ukuzenzisa kwisitayile seApple TV, ngaphezu kwayo nayiphi na into kuba sisixhobo esixabisa isithathu sentengo ye-Apple TV. Kwelinye icala, ukungavisisani phakathi kukaGoogle noApple kuyacaca, kungoko iAirPlay ayenziwanga iChromecast, ke kuya kufuneka sixhomekeke kwizicelo zangaphandle, nangona zinokubonelelwa ngezinye iindlela esele sikuxelele ngaphambili, inyani yintoni engonelisekanga njenge-AirPlay, kodwa kungcono kunanto. Inyani yile yokuba sifumana izixhobo ezininzi zeBhokisi yePC ye-Android ngexabiso elithe kratya elinokubonelela ngokugqibeleleyo ngeChromecast, nangona oko kuya kusinika iintloko ezininzi ngakumbi.
Ukuba ucacile malunga nesibonelelo oza kusinikar, engagqithisi ngaphaya kokudlala iividiyo ezivela kwiSafari, iYouTube, iSpotify kunye nenye into encinci Esi sisixhobo sakho. Ukuba uzibekela eminye imiceli mngeni, iChromecast 2 ayizukulinganisa.
UGoogle ungenise kancinci
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » I-Chromecast 2, sihlalutya i-Google's "AirPlay" [IVIDIYO]
Ndinayo okoko yaphuma kwaye inyani kukuba kufanelekile ngexabiso elinalo. Kuyinyani ukuba andiyisebenzisi kakhulu, kodwa ixesha nexesha ndichitha iiyure ndibukele iividiyo zeYouTube, amaxwebhu, njl njl kumabonwakude. ndiye ndithathe ixabiso lokwenza amortised.
Ndinayo malunga neenyanga ezi-6 kwaye ndonwabile, ixabiso elisemgangathweni lilunge kakhulu ndiyisebenzisa yonke imihla kunye ne-atresplayer app efuna ukuphucula le app kakhulu kodwa hey inkonzo endinayo kwi-wifi ye-5Gz kwaye umthwalo wadubula yonke i-ostiaa
Ngamafutshane siza kuba nesifundo seWiseplay, usetyenziso lomxholo oluhambelana neChromecast kwaye ikuvumela ukuba ubone onke amajelo eTV emhlabeni. Uya kuthanda.
Ndinayo iinyanga ezisibhozo kwaye ndibukela iividiyo kunye neemovie kwiYouTube
Ndine-EzCast5g kwaye isebenza kakuhle, izipili nayo yonke into, isebenza ngaphandle kweintanethi kwaye idlala yonke iaudiyo / ividiyo nge-Airplay ye- € 24, kodwa eyona nto iphambili kukuba iNetflix ayihambelani nokubamba okukhulu ...
I-Apple isungula i-iOS 9.3.5, sikuxelela ibali elibi emva kohlaziyo
I-iPhone yexesha elizayo inokurekhoda amasela kwaye igcine iminwe yabo, ngokwe patent